“Ma ogolin in Somaliland keento Sool iyo Sanaag qaybinta kaadhka codbixiyaha Puntland dhulka ay xukunto way difaacanaysaa”… wasiir Qarjab – HormoodNews
“Ma ogolin in Somaliland keento Sool iyo Sanaag qaybinta kaadhka codbixiyaha Puntland dhulka ay xukunto way difaacanaysaa”… wasiir Qarjab
08/11/2017 6:55 pm by HormoodNews Views: 9
Garoowe (HMN): Maamul goboleedka Puntland ayaa jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeedhay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland oo sheegay in ay Puntland ka heshiiyeen in aanay carqaladdo ah ka dhicin degaamadda bariga mudadda ay qaybinta kaadhka codbixintu ka socoto.
Wasiirka warfaafinta maamulka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdi Xirsi Cali (Qarjab), oo maanta magaaladda Garoowe ugu waramay Puntland-tv ayaa sheegay in aanay jirin wax ay ka heshiiyeen wasiirka daakhiliga Somaliland Yaasiin Maxamuud Xiir (Faratoon).
Wasiirka Puntland ayaa hoosta ka xariiqay in aanay marnaba ogolaan doonin in Somaliland ay qaybinta kaadh bixiyaha keento degaamo ka tirsan Sool iyo Sanaag, isagoo carabka ku adkeeyay in wixii dhibaato ah ee arrintaas ka yimaadda ay masuuliyadiisa qaadanayso Somaliland.
Isagoo arrimahaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxaan doonayaa in aan beeniyo war ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland oo shalay hadlay, oo yidhi Puntland waxaan kala heshiinay in aanu sanduuqyadda kaadh qaybinta codbixiyaha gayno goboladda Sool iyo Sanaag.
Arrintaa wax ka jiraa ma jiraan. mana ogolin in goboladda Sanaag iyo Sool ay Somaliland sanduuqyadda keento. Cidii goboladaas sanduuqyo keenta, wixii dhib ah ee ka yimaadda masuuliyadiisa iyadaa qaadanaysa. Puntland dhulka ay xukunto way difaacanaysaa”.
Ugu danbayn wasiir Qarjab, ayaa ugu baaqay shacabka reer Puntland ee ku nool goboladda Sool iyo Sanaag in ay dawladoodu garab taagan tahay, isla markaana ay ka difaacayso cid kastoo soo farro-gelisa jiritaankooda.
“Dadka reer Puntland ee goboladda Sool iyo Sanaag jooga iyo meel kastoo ay joogaanba, waxaan leenahay Puntland maanta carqalad ma rabto. Laakiin, wixii jiritaankoodda iyo midnimadoodda soo farro-geliya, waa in loo diyaar garoobo, waana in la iska difaaco” ayuu yidhi wasiirka warfaafinta Puntland.
Geesta kale hadalkan ka soo yeedhay maamulka Puntland ayaa jawaab u ah kadib markii wasiirk arrimaha gudaha Somaliland uu magaaladda Laascaanood ka sheegay in masuuliyiin ka tirsan maamulka Puntland oo ay dhawaan is-arkeen in ay isla af-garteen in aan wax carqalado ah laga samaynin degaamadda bari ee goboladda Sool iyo Sanaag.
Mudadda ay ka socota qaybinta kaadhka codbixiyeyaasha jamhuuriyadda Somaliland oo Sabtida berito ka bilaabmaysa goboladaasi.